Jaamacada Carabta oo amaantay Faragelinta Imaratka ee Somaliya | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Jaamacada Carabta oo amaantay Faragelinta Imaratka ee Somaliya
Waddamada ku mideysan Ururka Jaamacadda Carabta ayaa Dowladda Imaaraadka Carabta ugu mahad celiyay heshiiskii ay dhex dhigtay Maamullada Galmudug iyo Puntland oo bishii la soo dhaafay ku dagaallamay Magaalada Gaalkacyo.
Maxamuud Cafiif oo ah afhayeenka Xoghayaha Ururka Jaamacadda Carabta ayaa sheegay in Dowladda Imaaraadka ay waddamada Jaamacadda Carabta ku jira ugu mahad celinayaan dadaalka ay ku joojisay colaad u dhaxeysay maamullada Puntland iyo Galmudug.
Waxaa uu sheegay in Tallaaabada uu qaaday Imaaraadka ay tahay mid muujineysa walaalnimo islamarkaana ku aadday xilli loo baahnaa.
Sidoo kale Waddamada Jaamacadda Carabta Imaaraadka Carabta waxaa ay soo dhaweeyeen dhameystirka Maamulka Hirshabeelle iyo u diyaar garowga doorashada labada aqal ee ka socota Soomaaliya.
Warka ka soo baxay Jamaacadda Carabta ayaa lagu sheegay in Waddamadaasi oo midyesan ay dowladda Soomaaliya ka taageeri doonaan qabsoomidda doorashooyinka Baarlamaanka iyo madaxtinimada Soomaaliya.
Xoghayaha Ururka Jaamacadda Carabta ayaa isna sheegay in Ururkooda ay wafddi korjoogto ka noqda doorashada Soomaaliya mar hore soo direen kuna suganyihiin Muqdisho,kuwaas oo ku biiraya korjoogtada Qaramada Midoobey iyo Midowga Afrika ka socota ee joogta SOomaaliya.
Howlgalka Jaamacadda Carabta ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in lacag dhan $90,000 oo Doollar uu ku bixiyay agabka loogu talagaly isbitaal Jaamacadeed oo ku yaalla Degmada Shangaani ee Muqdisho.